Yoma Car Share Membership
Your Yoma Car Share membership isaunique membership that allows you to access vehicles at Yoma Car Share 24/7 from hourly to up to 30 days basis fromaYoma Car Share rental hub. Your membership will allow you to reserve over the internet either from the Yoma Car Share website oramobile application that is available on both the App Store and the Google Play Store to useaYoma Car Share vehicle for periods from one hour to 30-days. Asamembership-based organization, we ask each member to respect not only the vehicle, but also these terms and conditions and the rights of your fellow members. This agreement and the terms and conditions below govern all other members as well as your membership and your usage of the cars. By agreeing to these terms and conditions, you agree to be bound by them and to receive notice of any changes to the terms and conditions through the posting of notice of such changes on the Yoma Car Share website: www.yomacarshare.com. Please look through the FAQ section on our website for further details on how the process works and for any additional requirements which you need to adhere to asamember.
This Contract (Rental Contract) you have entered with Yoma Fleet comprises the rental document for the hire of the vehicle (Rental Agreement) and these terms and conditions of rental (Terms & Conditions). When we refer to the Rental Contract, we mean both the Rental Agreement and the Terms & Conditions.
The date of the Rental Contract is the date shown on the Rental Agreement.
Please read the Rental Contract carefully. If there is anything you do not understand, please ask the Rental staff before signing and/or agreeing to the Rental Contract either on paper or on internet as your signature and/or agreement is your acknowledgement that you have read and understood the Rental Contract in its entirety and that you are bound by it. These Terms & Conditions shall be executed in both English and Burmese. If there isaconflict between the Agreement in its various translations, the Burmese version shall prevail.
Accident means an unintended, unforeseen, happening, incident or mishap, which is neither expected nor designed.
Account Holder meansaperson or organization that has agreed to these Yoma Car Share Terms and Conditions and takes full responsibility for the payment of all fees, charges, fines and costs incurred by all the Drivers linked to their account as set in these Terms & Conditions. An individual may be both an Account Holder and Driver. An organization is an Account Holder with authorized Drivers/Users to use the services of Yoma Car Share.
Active Booking Period means the period between the first tap in and final tap out by the Driver during the Booking period. Booking Period means the time that the Driver has booked for use ofaYoma Car Share.
Car refers toavehicle within the Yoma Car Share fleet thataYoma Car Share approved Driver is permitted to drive for the Booking Period.
Credit Card means MasterCard, JCB, and Visa Credit Cards.
Damage means any loss or damage to the Vehicle, including that caused by accident, hail, theft of the Vehicle, towing and salvage fees, assessing fees or loss of use.
Debit Card means JCB/MPU Card, MasterCard or Visa Debit Card.
Driver meansaperson over 18 years of age who has agreed to these Yoma Car Share Terms and Conditions and has been accepted by Yoma Car Share as someone that can driveaYoma Car Share car. An individual may be both an Account Holder and Driver. A Driver must be authorized by the Account Holder to be linked to their account if the Account Holder and the Driver are two separate entities. Drivers and Account Holders are also referred to as Members.
Legal Parking Space is any parking space that is usable by the general public 24/7. Thus, it excludes parking with the following designations: handicapped, no standing, no stopping, clearways. Paid/Metered parking is legal whilst the parking fee has been paid.
Off Road means any area that is notagazette road norasealed road nor an unsealed road and includes but is not limited to unformed roads, fire trails, tracks, river and tidal crossings, creek beds, beaches, streams, dams, rivers, flood waters, sand, deserts, rocks, fields and paddocks.
Rental Charges means all rental and associated charges plus commercial tax or other taxes and levies required by law and credit card recovery fees, all shown on the Rental Agreement.
Rental Location means the branch, hub or site from which you hired the Vehicle.
Rental Period means the period shown in the Rental Agreement or as extended by you or us.
Reserved Parking Space means the reserved space in which the Car is parked when not in use byaDriver. This space can only be used by the designated Yoma Car Share Car for that space.
Start of Rental means the date and time the rental commences at the Rental Location shown in the Rental Agreement.
Tap Card means the membership card that Drivers receive which allows them to accessaCar for the Booking Period.
Third Party Loss means the loss or damage to third party property, including other motor vehicle, and any third-party claim for loss of income or consequential loss.
Underbody Damage means any damage to the underside of the Vehicle and includes, but is not limited to, all parts of the drive train, chassis, steering, suspension, brakes, exhaust, floor pan and fuel systems.
Vehicle means the vehicle described in the Rental Agreement and includes parts, components, accessories, audio equipment and tools, or any vehicle substituted by us pursuant to the Rental Agreement.
We, Us, Our means Yoma Car Share including Yoma Fleet Limited.
Yoma Car Share/Yoma Fleet means Yoma Fleet Limited, Myanmar Company Registration Number 134369736 trading as Yoma Fleet “the owner” on the Rental Agreement.
Your Yoma Car Share Account means your credit card, Yoma Fleet charge account, or debit card nominated at the start of the rental for the debiting of charges under the Rental Contract.
Application to becomeaYoma Car Share Account Holder
A person or organization may apply to be accepted asaYoma Car Share Account Holder by submitting an application online or on paper.
An application to beaYoma Car Share Account Holder can only be accepted if:
2.1 the applicant agrees to be bound by these Terms and Conditions;
2.2 the applicant completes all parts of the application form/s that Yoma Car Share deems required. Required information includes but is not limited to certain payment method card information, corporate payment agreement and the driver license information.
The Account Holder must provide Yoma Car Share with correct information when applying to be an Individual Account Holder (including, without limitation, the Account Holder name, driver’s license, address, email address, credit card details). For Corporate Account Holder, it is the responsibility of the corporation to provide Yoma Car Share with the detail information of all the members under the corporate account including but not limited to the authorized person(s) for reservation approval/rejection, designated person(s) for payment, the driver license of the members under the Corporate Account and incorporation license among others. It is the Account Holder’s responsibility to update Yoma Car Share with any and all changes to this information during their membership.
Yoma Car Share has the right to authenticate new membership applications. This service conducts checks of information provided in your application including your driver’s license, contact details and supplied payment details, and company detail information for the corporate accounts. By applying to becomeaYoma Car share member you are authorizing us to conductacheck of the details provided in your application.
Yoma Car Share reserves the right to refuse any membership application at our discretion.
Application to becomeaYoma Car Share Driver
A person may apply to be accepted asaYoma Car Share Driver by submitting an application online or on paper.
An application to beaYoma Car Share Driver can only be accepted if:
2.2 the applicant completes all parts of the application forms that Yoma Car Share deems required information.
The Account Holder/Driver must provide Yoma Car Share with correct information when applying to beaDriver (including, without limitation, the Driver’s name, address, age and driving history). It is the Account Holder’s and/or Driver’s responsibility to update Yoma Car share with any and all changes to this information during their membership.
An Account Holder may have more than one Driver on his or her Yoma Car Share account. Any additional Driver information must be provided by the Account Holder via the Yoma Car Share platform. By addingaDriver, the Account Holder gives consent for the Driver to be billed on their account.
Accessing our cars
Cars can be accessed using the Tap Card provided by Yoma Car Share. All members are provided with the Tap Card after the registration has been approved. If the Tap Card is lost in possession of the account holder/driver, the Tap Car can be issued on request.
Drivers must access and exit the Cars using their Tap Card if applicable.
The Tap Card remains the property of Yoma Car Share and must be returned if the account is cancelled or otherwise ended.
Yoma Car Share's Responsibilities
Yoma Car Share will carry out regular serviceability and cleanliness checks on all Cars.
Yoma Car Share is not liable to an Account Holder or Driver under or in connection with this Agreement, whether for negligence, breach of contract, misrepresentation or otherwise, for:
2.1 Loss or damage incurred by the Account Holder and/or Driver asaresult of any claims made byathird party;
2.2 Loss of profit, goodwill, business opportunity or anticipated saving suffered by the Account Holder and/or Driver; or
2.3 Any indirect or consequential loss or damage suffered by the Account Holder or Driver.
The Car must only be driven by an authorized Yoma Car Share Driver. Only members are authorized Yoma Car Share Driver and only members are covered by Yoma Car Share’s damage cover.
Account Holders will be responsible for all damage or loss if they, or their Drivers, allowaperson who is not an authorized Yoma Car Share Driver to driveaYoma Car Share Car.
The Driver must not use the Car for:
3.1 Hire or reward.
3.2 Any illegal purpose.
3.3 Off-road driving is not permitted on any road or other surface which is not sealed other thanaroad under repair, oraroad notified to you by Yoma Car Share, unless the vehicle isaFour-Wheel Drive (4WD) vehicle.
3.5 Teaching someone to drive
3.6 Hauling any goods that are incorrectly or inappropriately loaded or for the haulage of which the Car was not designed
3.7 Driving Yoma Car Share vehicle outside the legal territory of the Republic of the Union of Myanmar
Account Holders and/or Drivers must not sell, rent or dispose of the Car or any of its parts, or attempt to give anyone any legal rights over the Car.
The Driver must not use the Car when under the influence of drugs and must obey the legal alcohol limits relevant to the roads and transportation laws in Myanmar.
The Driver must not carryanumber of passengers which exceeds the designed seating capacity of the Car.
The Driver must not carry baggage which would cause the Car to be overloaded.
Towing usingaYoma Car Share vehicle is illegal under Myanmar law.
The Driver must inform Yoma Car Share immediately to the 24/7 call center hotline if they become aware of any defect or damage toaCar. Internal damage, or car condition, must also be reported via the hotline number.
The Account Holder may be liable for payment of repairs toaCar in the event of unfair wear and tear or excessive cleaning being required, or if the Car has been damaged either inside or outside asaresult of use by the Driver.
The Driver must always use the Car in accordance with all applicable laws and regulations which may be in force at any time.
Yoma Car share reserves the right to immediately suspend and/or terminate the membership rights of its service to any Account Holder and/or Driver if an Account Holder and/or Driver contravenes any of these Terms and Conditions. On suspension, any existing Bookings under the Account Holder and/or Driver may be cancelled by Yoma Car Share at its discretion.
A Driver can only bookaCar under their name.
A third party cannot bookaCar on behalf of an Account Holder oraDriver under any circumstances. OnlyaCorporate Account Manager may bookavehicle on behalf of another driver using the corporate account.
A booking can be made online at any time, or via phone on 09 YOMAFLEET (09 966235338).
A booking confirmation email is sent after an online or phone booking is completed. The information in this email is what is considered reserved. It is the member’s responsibility to review every booking confirmation email to ensure they have the booking they desire.
15 minutes before the reservation time,adeposit of MMK 300,000 plus the trip total cost shall be pre-authorized for Credit Card users and transacted asapurchase for Debit Card and WavePay users. At the end of the trip, the balance between the preauthorized amount or the purchased amount shall be adjusted asarefund or further deduction based on the trip cost.
Yoma Car Share reserves the right to change the reserved Car for existing bookings, should Yoma Car Share move another Car to the Reserved Parking Space.
Yoma Car Share cannot guarantee your preferred booking time or Car will be available prior to booking.
An Account Holder and/or Driver must always book the Car prior to use.
The minimum Booking Period is 60 minutes with 30 minutes incremental increases.
Drivers can use the Car for the Booking Period only.
Account Holders and/or Drivers may makeabooking up to6months in advance.
Booking may be cancelled at any time prior to the commencement of the rental.
A booking cannot be cancelled once it has commenced, butarental can be terminated early.
The Account Holder can cancel his or her reservation up to3times per month without any charge. If the excessive cancellation i.e. more than3times inamonth is occurred, Yoma Car Share reserves the right to suspend the membership of the Account Holder and/or chargeapenalty of MMK 10,000 or 10% of the canceled reservation’s estimated invoice total, whichever is higher.
No cancellation fee is charged to the Corporate Account holder.
The Driver must collect the Car fromaYoma Fleet Rental Hub.
The Driver is responsible for assessing the condition of the Car (both interior and exterior) at the start of the Booking Period, in addition to checking fuel cards and fuel level. Failure to immediately notify Yoma Car Share by phone of any previously unreported damage or an untidy car at the start ofabooking, will be deemed your acceptance of the good working order of the Car at the beginning of the Booking Period. Thus, anything reported after the booking commences will be considered the Driver’s responsibility, and the driver will be held liable for any repair or cleaning costs.
Yoma Car Share do not guarantee that the Account Holder shall have the reserved car on the date of reservation. Yoma Car Share reserve the right to change Car in case of the fleet availability and request the Account Holder of rate changes depending on the type of Car being changed in the reservation.
DuringaBooking Period
Drivers are responsible for the Car, and anything that happens to it, for the entire Booking Period, not simply the Active Booking period. This responsibility includes damage which occurs, for whichathird party cannot be held responsible, is also the responsibility of the Driver, as is any excess payable on any damage claim.
During the Booking Period, Drivers must immediately inform Yoma Car Share by phone of any fault in the Car and must not use the Car whilst it is in an unsafe or unroadworthy condition.
Drivers must make sure they use the correct fuel when refueling the Cars.
Smoking is prohibited in every Car. Pets are prohibited in Cars, unless they are inapet carrier. Cleaning for the removal of pet hair will incurapenalty. Strong odor food/items such as including but not limited to durian, salted dried fish, bamboo shoots, industrial chemicals among others are also prohibited. Drivers who smoke in the Car or allowapet inacar outside ofacage will incuracleaning fee, charged to the Account Holder.
Drivers must lock the Car when not using it during their Active Booking Period with the Tap Card.
Account Holders are responsible for paying any tolls, fines, fees or charges Drivers may incur during the Booking Period, including fees for using Highway or any other applicable toll roads.
Support cannot be offered to Drivers who do not have access toaphone during their booking.
Fuel is included in our rates and Drivers must use the fuel card located in the glove compartment to refuel. When returning the Car, Drivers must ensure that the fuel tank is at least 1⁄4 full.
IfaDriver usesaYoma Car share fuel card for any purpose other than refuelingaYoma Car Share Car, Yoma Car Share will be entitled to terminate that Driver’s membership. The Account Holder will be liable to refund all money associated with such an incident, plus any reasonable expenses incurred to recover money.
In the event ofaYoma Car share fuel card being faulty, missing or if there are no available fuel stations that accept the Yoma Car share fuel cards, the Driver will be required to pay for the fuel and then seek reimbursement from Yoma Car Share. To obtain reimbursement, the Driver is required to retain the tax invoice for the fuel and send it in to Yoma Car Share before the end of the trip/reservation. The amount of the fuel purchase will be deducted from the Account Holder’s invoice. The Driver is also required to report the faulty or missing Fuel card to Yoma Car share at 09 YOMAFLEET (09 966235338).
Accident, damage & theft
If the Driver has an accident, the Driver should not admit fault and should: 1.1 Make the Car secure and inform the police immediately if anyone is injured or there isadisagreement as to the facts;
1.2 Note down the car registration, names, addresses and license numbers of any other drivers involved;
1.3 Note down the names and addresses of any witnesses; and
1.4 Call Yoma Car Share immediately on 09 YOMAFLEET (09 966235338)
The Driver must provide all information Yoma Car Share reasonably requests concerning the accident within 48 hours of any request. Without limiting the foregoing, the Driver must return to Yoma Car Shareacorrectly completed vehicle incident report form within 24 hours.
Drivers must provide accurate statements and cooperate with Yoma Car Share in any way as required by them.
If recovery fromathird party cannot be made for damage or loss, the Driver will be liable for the excess payable.
Any breakdown involvingaCar must be reported to Yoma Car Share by phone on 09 YOMAFLEET (09 966235338). Either Yoma Car Share and/or roadside assistance will attend to the Car. The Driver may be provided with alternative transport.
During the Booking Period, ifaproblem arises that prevents or limits the use of the Car or that may compromise people’s safety, Drivers must immediately notify Yoma Car Share on 09 YOMAFLEET (09 966235338) and park the Car in accordance with road rules and Yoma Car Share’s instructions.
Account Holders are liable for all parking and traffic offence penalties that relate toaDriver’s Booking Period including, but not restricted to, parking tickets, speeding fines, clamping fines, clearways and impound charges.
In the event that Yoma Car Share receivesaparking or traffic offence notice and is either:
2.1 obliged to provide the relevant authority with the identity of the Driver of the relevant Car at the time of the offence prior to payment of the offence notice, or
2.2 is able to transfer liability for the offence notice to the Driver of the relevant Car at the time of the offence prior to payment of the offence notice, Yoma Car Share will do so.
In the event that Yoma Car Share receivesaparking or traffic offence notice and is unable to transfer liability for the payment of the offence notice to the Driver of the relevant Car at the time of the offence prior to payment, the Account Holder will be responsible for the cost of the offence notice.
Ifamember parks inacommercial car park during an Active Booking Period, the member is responsible for paying parking fees.
The Driver must return the Car in good condition (internal and external) and in good working order, with at least 1/4 ofatank of petrol toaYoma Car Share rental hub, no later than the end of the Booking Period.
If the Driver returns the Car after the end of the Booking Period, the Account Holder will incuralate fee in addition to the hourly fees for use of the Cars:
2.1 The Account Holder and/or Driver may extend the Booking Period up to 30 days, at which time it can no longer be extended withoutanew booking being commenced.
2.2 Extending the rented Car on the Yoma Car Share website or mobile application is allowed only once and it is the responsibility of the Account Holder/Driver to plan their trip accordingly, and that Yoma Car Share may request the Account Holder/Driver to makeanew reservation and/or change the type of Car available in the fleet due to the reservation extension.
2.3 For reservation extension, an extension fee 10,000.000K is applied to your rental charges. If you do not extend the reservation, the late fee of 2,500.00K per 30 minutes plus rental fees is charged until you return the vehicle.
2.4 We reserve the right to substituteasuitable replacement vehicle at any time to the extended reservations.
2.5 We reserve to charge the Account Holder of the additional deposit when the extension period is more than7days to the current reservation. This additional deposit and any balance shall be either refunded or charge further depending on the actual trip cost at the end of the trip.
Drivers must ensure that all doors of the Car are closed before, and locked after, ending their Booking and before leaving the Car. If the car is left unlocked at the end ofabooking, the Account Holder may be charged the cost of any damage or loss of property suffered by Yoma Car Share due to the car being left unlocked by the Driver.
If the Car is left in an excessively dirty state that requiresadeep clean before another Driver can use the Car, the Account Holder must pay for the valet. Yoma Car Share reserves the right to suspend any account holder of its services in case of excessive uncleanliness to the vehicle.
Drivers must endeavor to ensure that the Car is returned to the designated rental hub at the end of the Booking Period. If the Driver is forced to park the Car in any other area, they must notify Yoma Car Share immediately by phone of the exact location of the car. Drivers must park inaLegal Parking Space and must pay any parking fees in paid parking spaces during the entire Booking Period. If Yoma Car Share or the Driver receivesaparking infringement notice in respect of the driver parking the Car in an illegal parking space, the Driver and/or the Account Holder will be liable for the fine.
Drivers must ensure that all functions that use the Car’s lights and accessories are switched off before ending an Active Booking. If one or more of the functions that use the Car’s battery is left on, the cost of the rectification may be applied to the Account Holder at Yoma Car Share’s discretion.
Drivers must return the Car in its original state i.e. there shall be no damages, no removal of any items in the car including but not limited to car seats, seat belts, floor mats, spare tyre and accessories and any other items provided by us. Other items may mean and/or include fire extinguisher, first-aid kid, starter pack with wheel tax, car license registration, fuel books/cards and any other relevant documents, branding logo stickers on both exterior and/or interior of the Car among others. Removal of stated items in this clause can result in paying relevant penalty/fine to Yoma Car Share.
Drivers must check that they have not left any belongings in the Car before leaving the Car at the end of their Booking Period. The Driver agrees not to hold Yoma Car Share responsible for any belongings left in the Car. If Yoma Car Share collects lost and found items on its cleaning schedule, Yoma Car Share will hold items left in the Car for no longer than thirty days to allow time for collection. After thirty days, all items will be given to charity.
IfaDriver requires access toaCar after the Booking Period to recover belongings left in the Car, then the Driver can call Yoma Car Share on 09 YOMAFLEET (09 966235338) and requestaremote entry.
IfaDriver hasabooked Car and keeps the car past the end of the booking time without notifying Yoma Car Share and does not answer calls from Yoma Car Share, we may consider the Car stolen and report the Driver to the police. Yoma Car Share reserves the right to charge the Driver for the entire period they keep the car or until we retrieve the Car. Yoma Car Share also reserve the right to retrieve the car without notifying the Driver, dispose of any property left in the car, suspend the Account and immediately process payment for fines and fees.
The Account Holder indemnifies Yoma Car Share for any claim made byathird party resulting from Yoma Car Share’s recovery or repossession of the Car.
Current plans and rates information is available on Yoma Car Share’s website. We reserve the right to change any price on our website or mobile application without notifying to our account holders.
Account Holders will incur usage charges made by all Drivers on their account including but not limited to hourly rates, daily rates, and kilometer rates. The hourly rate, daily rate andakilometer rate will depend on the Account Holder’s booking period, usage and the type of vehicle booked.
Rates may change from time to time and the price agreed on the reservation confirmation is final and is not negotiable. All up to date rates information is available on Yoma Car Share’s website at www.yomacarshare.com or on the mobile application.
From time to time Yoma Car Share may offer promotional rates. All information on specials, including eligibility and any special terms and conditions, will be available on Yoma Car Share’s website at www.yomacarshare.com. It is the member’s responsibility to be aware of, and adhere to, any offer conditions.
In case of accidents or loss, the Account Holder and/or Drivers liability is limited toanon-waiverable excess of USD 300 unless recovery can be made fromathird party. In the event of illegal use, no coverage will apply.
By allowingaperson to becomeaDriver of Yoma Car Share, Yoma Car Share is authorizing that Driver to drive under Yoma Car Share’s damage cover policy.
No cover is provided for the theft of personal belongings from the Car, nor is any personal accident cover provided to the driver.
Account Holders are liable to pay the full cost of the damage in case of the followings:
4.1 Damage or Third-Party Loss caused or contributed to by any driver that leaves the scene of the accident prior to the attendance of the police or reporting the accident to the police;
4.2 the full cost of replacing or repairing any accessories supplied by us including, but not limited to child restraints, GPS units, and keys;
4.3 Damage caused by the use of the incorrect fuel type;
4.4 The accident is caused by breaching the traffic rule(s) by the driver and/or the Account Holder/Member.
4.5 The accident is caused by an unauthorize driver(s) or Driver/Account Holder/Member withoutavalid driving license.
4.6 The negligence of the driver caused the accident.
4.7 Underbody damages or overhead (roof) damages will not be covered by the damage cover policy.
4.8 Hit-and-run by either the driver/account holder/member orathird party.
4.9 The accident is caused due to over speeding by the Driver/Account Holder/member.
4.10 Unreported accident to Yoma Fleet’s hotline immediately after the cause of the accident.
Irreparable Tire Damage
5.1 In case of irreparable tire damage i.e. the tire can no longer be used for its intended purpose by the Account Holder/Driver, Yoma Car Share reserve to charge the responsible party of the damage. Our policy on Tire is thatanew tire must be replaced the current tire when the current tire reaches the lifespan of 40,000 KM in service. For the tire damage recharge payable by the Account Holder/Drive in case of irreparable damage, Yoma Car Share shall fairly calculate the recharge amount based on the lifespan of the tire and invoice the Account Holder/Driver accordingly.
Account Holders are responsible for the payment of all charges in any way incurred in connection with their use of the Yoma Car Share service. These charges are payable on the payment method added linked to the Yoma Car share account, Yoma Fleet Limited bank accounts and/or the corporate account payable agreement.
When you joined, or before making your first booking, you gave us your debit or credit card details as your payment method. You must notify us immediately if these details change. If we cannot authorize your payment card before each rental, you will not be able to unlock and use the car.
When you give us your payment method card details, you agree to allow us to deduct from your card all charges that you may have incurred.
We reserve the right to pre-authorize the deposit of MMK 300,000 plus the total trip cost 15 minutes prior to the start of the reservation time for the Credit Card Account Holders and transact the deposit and the total trip cost asapurchase transaction for the Debit Card Holders and WavePay users. Your booking will only be confirmed once this authorization has been successfully obtained. We will notify you if your payment card is declined. For Corporate members, the authorized Account Holder must approve or reject the reservations; no deposit is required in the corporate transactions.
Ifapayment method card provided by the Account Holder to Yoma Car Share is declined by the card issuer or bank or WavePay or the corporate account does not make payment afteraspecified date on the invoice(s), Yoma Car Share may, at its discretion, suspend or cancel all Drivers linked to the Account Holder’s account until Yoma Car Share is satisfied accurate details have been provided and payment has been received by Yoma Car share.
Ifapayment method, card or bank account number is declined by the card issuer or bank orapayment platform, leaving the Account Holder with an outstanding balance, then access to the Cars will be suspended for all Drivers on that account until full payment is received by Yoma Car Share. If the Corporate Account Holder does not make the outstanding payment within the allowed credit days, Yoma Car Share reserves the right to suspend all Drivers on that corporate account until full payment is received by Yoma Car Share.
If an Account Holder’s outstanding balance remains overdue and unpaid, this may affect the Account Holder’s ability to rent any Yoma Car Share vehicles in the future from Yoma Car Share or our related entities.
At the end of every Booking, we will debit your account for the booking and kilometers charges and any additional, damage cover excess and additional fees if applicable. For Corporate Account Holder, we will send the invoices that include but not limited to booking and kilometer charges and additional charges incurred during the booking period.
The Account Holder and Driver’s agreement to these Terms and Conditions shall constitute authority for Yoma Car Share to compute and charge all monies due against the Account Holder’s nominated payment method. This includes charges due asaresult of theft of, or damage to, the Car and any fines and court costs for parking and traffic offences.
Failure to make any payments, including but not limited to rental charges, damages, parking and traffic offences, and any other fees payable, due at Yoma Car Share either via any payment methods on Yoma Car Share platforms and/or to the Yoma Fleet Limited bank account within the specified date, the Account Holder(s) agree that Yoma Car Share reserve the right to publicly announce either in the newspaper and/or on online media that the Account Holder(s) has failed to make the payment and are required to do so at the soonest time. With this announcement, the Account Holder(s) agree and understand that Yoma Car Share can specify the payable amount owed to Yoma Car Share and the Account Holder(s)’s personal and/or company information, including but not limited to name(s), date of birth, national identification number, passport number, driver license number, company registration, and/or Form2of the registered company of the Account Holder(s) to the public in collecting any payable due at Yoma Car Share.
Yoma Car Share shall refund the preauthorized or purchase amount of deposit MMK 300,000 which is to be transacted before the reservation time within 48 hours after the Driver/Account Holder has returned the car to us, and that the Driver/Account Holder has cleared any payable with us including but not limited to service charges, parking fees, penalties and fines. Yoma Car Share reserves the right to hold the Deposit amount until any disputes between Yoma Car Share and the Driver/Account Holder are resolved.
If you have ended your trip earlier than the reservation time, Yoma Car Share shall refund the excess amount to you within 48 hours of the your end trip provided that there are no penalties, fines, services chares, and any other disputes between you and Yoma Car Share.
The receipt of the refunded amount in your account is solely on your Bank, payment portal or Card Issuer’s discretion and Yoma Car Share does not bear any liabilities for the delay in the receiving of the refunded amount.
You have consented to provide your personal information to us in becoming an Account Holder/Driver, and that you give us the right to including but not limited to store, review, check, edit and delete your personal information in our database for you to use our services.
We collect the personal information you provide in the application form and in the course of your membership to provide you with the Yoma Car Share service. We use your information to verify who you are, to make sure that you can becomeaYoma Car Share member and to administer our ongoing relationship with you. If you do not provide us with all the information requested, you will not be able to becomeamember or use our vehicles.
Marketing communications: To keep you up-to-date with service developments and special offers from Yoma Car Share, we will send you regular updates and new offers by email, text message or by post, depending on the contact details you provide in your application form. You are given the option to choose not to receive these updates and offers in the application form, or you can otherwise unsubscribe at any time by emailing us at aung@yomafleet.com
4.1 our related companies, including but not limited to companies under the Yoma and FMI Groups;
4.2 our third-party service providers, including payment service providers and online identity verification service providers;
4.3 if you areaDriver but not the Account Holder, the Account Holder.
Yoma Car Share’s primary means of communication is email. Active accounts must permit Yoma Car Share email communications. Yoma Car Share cannot service members who do not haveavalid email address.
Yoma Car Share also requiresamobile phone number be provided for each Account Holder and Driver. It may be periodically used for important customer service updates, accounts or notification of offers. It is advised that members always haveamobile phone whilst onabooking. Otherwise, Yoma Car Share cannot guarantee car access and the best standard of service.
It is entirely the member’s responsibility to keep all contact and payment details, particularly email, debit or credit card and mobile phone number up to date. If an Account Holder or Driver’s email is returned asabounced message or the Account Holder or Driver has unsubscribed from receiving emails from Yoma Car Share, Yoma Car Share is under no obligation to take steps to update such email addresses. It is the responsibility of the Corporate Account Holder to update us with the member/Driver information in the account to us. If the member/Driver leaves the employment of the Corporate Account Holder, continues using our services without the knowledge of the Corporate Account Holder, the Corporate Account Holder acknowledges the failure to update the information to Yoma Car Share and that the Corporate Account Holder agrees to be responsible of any charges, fines, penalties incurred by the said member/Driver to Yoma Car Share.
If the Account Holder changes his address, email address, contact number and/or update the expired driver license, it is the responsibility of the Account Holder to update such information on Yoma Car Share website/mobile application. The failure to update such information may result in suspension of the membership until the current and relevant information has been updated.
The Yoma Car Share Call Center is open 24-hour 7-dayaweek including Public Holidays and can be reached at 09966235338. All queries can be dealt with through 24-hour Yoma Car Share Call Centre.
Account Holders can request to terminate their Yoma Car Share account at any time. The Account Holder must request the cancellation of their account from their Yoma Car Share member at aung@yomafleet.com and return the Tap Card if applicable.
Account Holders can terminate any Driver on their Yoma Car Share account at any time. The Account Holder can request the removal of their Drivers from their Yoma Car Share member area by informing Yoma Car Share at aung@yomafleet.com
Yoma Car Share may terminate an Account Holder and/or Driver’s membership immediately if the Account Holder and/or Driver breaches any of these Terms and Conditions.
If Yoma Car Share terminatesamembership, it will not affect Yoma Car Share’s right to receive any monies owed to it by the Account Holder.
Any monies owed to Yoma Car Share at the time of termination of membership will become immediately due and payable. By accepting these Terms and Conditions, the Account Holder grants Yoma Car Share the right to charge against the Account Holder’s nominated payment method all monies due and payable at the time of termination of membership. This includes but is not limited to charges due asaresult of theft of, or damage to, the Car and any fines and court costs for parking and traffic offences as described in clause 15.
On breach of this Agreement, Yoma Car Share may give an Account Holder’s details to credit reference agencies, Customs & Excise, the Police, debt collectors, or any other relevant organization.
Termination of membership by Yoma Car Share will not affect its accrued rights under the conditions of this Agreement.
Yoma Car Share reserves the right to amend these Terms and Conditions from time to time as it sees fit or necessary. Notice of any changes in these Terms & Conditions will be provided to Account Holders and Drivers with the reservation confirmation email. It is the responsibility of the Account Holder or User to be self-aware of the terms and conditions, and that Yoma Car Share is under no obligation to notify the Account Holder or User of the updated terms and conditions.
Yoma Car Share shall not be liable for eitherafailure to perform or delay in performing any of its obligations if performance is delayed, hindered or prevented by force majeure, which expression shall mean any event beyond the reasonable control of Yoma Car Share.
If any provision of this Agreement is or becomes invalid or unenforceable, the remaining provisions shall be interpreted in suchaway so as to remain in effect.
This Agreement and all matters arising from or connected with it are governed by and shall be construed in accordance with Republic of the Union of Myanmar Law. The courts of Republic of Union of Myanmar have non-exclusive jurisdiction to settle any dispute arising from or connected with these Terms and Conditions.
Yoma Car Share has the right to assign or novate at its election its rights and obligations under these Terms & Conditions in favor ofathird party. The Account Holder is prohibited from assigning its rights under these Terms & Conditions without the written consent of Yoma Car Share.
These terms and conditions are bound between the member/Driver/Account Holder and Yoma Car Share regardless of the mode of agreement i.e. the member/Driver/Account Holder understands that the agreement made electronically is as valid as the member/Driver/Account Holder’s signature on paper.
Yoma Car Share အသင်းဝင်
လူကြီးမင်းသည် Yoma Car Share ၏ အသင်းဝင်တစ်ဦးအနေနှင့် Yoma Car Share ရှိ ကားအမျိုးအစားများကို နာရီပိုင်း မှ စတင်၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိ ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်များအနေဖြင့် Yoma Car Share website မှ ဖြစ် စေ၊ App Store နှင့် Google Play Store တို့မှတဆင့် Yoma Car Share Application ကို download ရယူ၍ဖြစ်စေ၊ Yoma Car Share ရှိ ကားများကို နာရီပိုင်းမှစတင်၍ ရက် ၃၀ အထိ ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင်တဦး ချင်းစီအနေဖြင့် ယာဥ်များကိုသာမက ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြားအသင်းဝင်များ၏အခွင့်အရေး များကိုပါ အလေးထားပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ အစည်းအနေဖြင့် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် အားလုံးသောအသင်းဝင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကားအသုံးပြုမှုများအားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဖေါ်ပြပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကို သဘောတူခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ၎င်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာရန် သဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူပါမည်။ ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့ပါက Yoma Car Share Website: www.yomacarshare.com မှတဆင့်လည်း မည်သည့်ပြောင်းလဲမှု မျိုးမဆို သတိပြုမိစေရန် တင်ပြသွား မည်ဖြစ်သည်။
အသင်းဝင်တဦးအဖြစ် လူကြီးမင်း လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ website ရှိ FAQ အပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Yoma Fleet Limited/ Yoma Car Share နှင့် လူကြီးမင်းသဘောတူခဲ့သည့် ဤသဘောတူစာချုပ် (ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်)တွင် ကားငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း (ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်) နှင့် ဤငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်ကို ရည်ညွှန်းသောအခါ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်နှင့် ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို ဆိုလိုသည်။ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်၏နေ့စွဲသည် ငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်နေ့စွဲပင်ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းခြင်း သဘောတူစာချုပ်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုလေ့လာပါ။ အကယ်၍ လူကြီးမင်းမှ နားမလည်သည့်စည်းကမ်းချက်တစုံတရာ ပါရှိပါက ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်မှတဆင့်ဖြစ်စေ သဘောတူညီခြင်းမပြုမီဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများထံ မေးမြန်းပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ လူကြီးမင်းမှ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး (သို့မဟုတ်) သဘောတူညီပြီးပါက ဤသဘောတူညီချက်အရ လူကြီးမင်းသည် ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ် တစ်ခုလုံးအား ဖတ်ရှုနားလည်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။ ဤ သဘောတူစာချုပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှင့် မြန်မာဘာသာ ၂မျိုးဖြင့် ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက မြန်မာဘာသာနှင့် ချုပ်ဆိုထား သောစာချုပ်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု - မတော်တဆထိခိုက်မှုဆိုသည်မှာ ကြိုတင်မသိရှိနိုင်သော သို့မဟုတ် မမျှော်လင့်ထားသော အဖြစ်အပျက်များ၊ မရည်ရွယ်သည့်၊ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သည့်၊ ကံမကောင်း၍ ဖြစ်ပွားသည့် ဖြစ်ရပ်များကို ဆိုလိုသည်။
စာရင်းပိုင်ရှင် - ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျည်းစည်းကမ်းများအရ စာရင်းဖွင့်သူနှင့်ဆက်စပ်သောယာဉ်မောင်း အားလုံး၏ အခကြေး ငွေ၊ စရိတ်၊ ဒဏ်ငွေနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးအတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူသောလူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။ တစ်ဦးတယောက်ချင်းဆိုသည်မှာ စာရင်းပိုင်ရှင်နှင့်ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင် မှုကို အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသော ယာဉ်မောင်း၊ အသုံးပြုသူများနှင့် စာရင်းပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်သည်။
အကျုံးဝင်သော ငှားရမ်းကာလ - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းကာလအတွင်း ယာဉ်မောင်းများက ယာဉ်အား ပထမဆုံး ထိပုတ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးထိပုတ်အသုံးပြုခြင်း ကြားကာလကို ဆိုလိုသည်။ ကြိုတင်ငှားရမ်းကာလဆိုသည်မှာ Yoma Car Share မှ ယာဉ်မောင်းသူက ကြိုတင်ငှားရမ်းထားသော အချိန်ကာလဖြစ်သည်။
ကား - ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ကားများအား ကျွန်ုပ်တို့မှအတည်ပြုထားသော ယာဉ်မောင်းကို ငှားရမ်းကာလအတွင်း မောင်းနှင့်ခွင့်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြီရှင်ကဒ် (Credit Card) - ဆိုသည်မှာ မာစတာကဒ်၊ ဂျေစီဘီကဒ်၊ ဗီဇာကြွေးဝယ်ကဒ် တို့ဖြစ်သည်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း - ဆိုသည်မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှု၊ မိုးသီးကြွေကျခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်း၊ ယာဉ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အပါအဝင် ယာဉ်ဖြင့်ဆွဲယူရသည့် အခကြေးငွေ၊ အသုံးပြုမှုဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် အခကြေးငွေနှင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခအပါအဝင် စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
မြီစားကဒ် (Debit Card) - ဂျေစီဘီ / အမ်ပီယူကဒ်၊ မာစတာကဒ်၊ ဗီဇာကဒ်နှင့် ဒက်ဘစ်ကဒ် တို့ဖြစ်သည်။
အခွင့်ရယာဉ်မောင်း - အခွင့်ရယာဉ်မောင်းဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျည်း။ စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရှိ ကားများကိုမောင်းနှင်နိုင်သောသူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့မှ ခွင့်ပြု၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ တစ်ဦးချင်းဆိုသည်မှာ စာရင်းပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်း နှစ်ဦးလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ စာရင်းပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းသည် သီးခြားအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါက စာရင်းပိုင်ရှင်၏ အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် စာရင်းပိုင်ရှင်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
တရားဝင်ကားရပ်နားရန်နေရာ - အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်သော မည်သည့်ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာမဆို အကျူံးဝင်သည်။ ကားမရပ်ရနေရာ၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး စသည်တို့သည် ကားမရပ်ရသည့် ခြွင်းချက်နေရာများဖြစ်သည်။ ယာဉ်ရပ်နားခပေးဆောင်ပြီး ရပ်နားခြင်းသည် တရားဝင်သည်။
လမ်းကြမ်း - ဆိုလိုသည်မှာ တရားဝင်လမ်းပြမြေပုံများပေါ်တွင် မပါဝင်သောလမ်းများ (သို့မဟုတ်) ကျောက်စရစ်မြေနီလမ်း သို့မဟုတ် ကတ္တရာ သို့မဟုတ် ရေနံကတ္တရာ သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်လမ်းမဟုတ်ဘဲ ပုံသဏ္ဍာန်မရှိသည့်လမ်း၊ အချောမသပ်ရသေးသော ခင်းလက်စလမ်းများ မီးရထားလမ်းများ၊ မီးခြားလမ်းများ၊ မြစ်ရေနှင့်ဒီရေကူးလမ်းဆုံများ၊ ချောင်းကူးလမ်းများ၊ ကမ်းခြေများ၊ စမ်းချောင်းများ၊ တာတမံများ၊ မြစ်များ၊ ရေကျော်လမ်းများ၊ သဲသောင်ပြင်၊ ကန္တာရကွင်းပြင်များ၊ ကျောက်ထူထပ်ရာနေရာများနှင့် ခြံဝင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
ငှားရမ်းခ - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းခနှင့်ဆက်စပ်ကျသင့်ငွေများ အပါအဝင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ အခြားအခွန်အခများ၊ ဥပဒေအရ စည်းကြပ်ကောက်ခံမှုများ၊ မြီရှင်ကဒ် (Credit Card) ပြန်လည်ရရှိရေး ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အခကြေးငွေများပါ ပါဝင်ပါသည်။
ငှားရမ်းခြင်းနေရာ - ဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်းမှ မော်တော်ယာဉ်အား ငှားယူသည့် အချက်အချာတည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းခွင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းခွဲအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။
ငှားရမ်းခြင်းသက်တမ်း - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသော အချိန်ကာလ (သို့မဟုတ်) သင်/ ကျွန်ုပ်တို့မှ သဘောတူညီပြီး ထပ်မံတိုးမြှင့်သည့် ငှားရမ်းခြင်းကာလကိုဆိုလိုသည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကားရပ်နားရန်နေရာ - ဆိုသည်မှာ ကားမောင်းသူမှ အသုံးမပြုသောကား ရပ်ထားသည့်နေရာကို ဆိုလိုသည်။ ဤနေရာကို သတ်မှတ်ထားသော Yoma Car Share မှ ကားများသာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းခြင်းအစ - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းခြင်းသဘောတူညီချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ငှားရမ်းခြင်းနေရာတွင် စတင်သည့် ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နေ့ ရက်နှင့် အချိန်ကို ဆိုလိုသည်။
ထိပုတ်ကဒ် (အသင်းဝင်ကဒ်) - ငှားရမ်းကာလအတွင်း ကားအသုံးပြုသူမျာအား ကားကို အသုံးပြုခွင့်ပြုသည့် အသင်းဝင်ကဒ်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ - သဘောတူညီချက်စာချုပ်ပါ အကြောင်းအရာ စည်းမျည်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများကို ဆိုလိုသည်။
တတိယ သို့မဟုတ် တခြားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု - ဆိုသည်မှာ အခြားမော်တော်ယာဉ်အပါအဝင် တခြားအဖွဲ့အစည်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) နောက်ဆက်တွဲဆုံးရှံးမှုအတွက် တခြားအဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းဆိုမှုများဖြစ်သည်။
ကားကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်း ပျက်စီးမှု - ဆိုသည်မှာ မောင်းနှင်သည့် အစိတ်အပိုင်း၊ မော်တော်ယာဉ် အောက်ခံထည်၊ စတီယာရင်၊ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့် ဝင်ရိုးဆက်သွယ်ပေးသည့် ဆိုင်းထိန်းစနစ်၊ ဘရိတ်စနစ်၊ အိပ်ဇောပိုက်စနစ်၊ ကားကြမ်းခင်းနှင့် လောင်စာဆီစနစ်များ အပါအဝင် မော်တော်ယာဉ်အောက်ခြေပိုင်း ပျက်စီးမှုတစုံတရာ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
မြေနီလမ်း - ဆိုသည်မှာ ကွန်ကရစ်၊ ကတ္တရာ၊ အစရှိသည့်မာကျောချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်မရှိသည့်လမ်းဖြစ်သည်။
မော်တော်ယာဉ် - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အသံဆိုင်ရာကိရိယာများ (သို့မဟုတ်) ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ အစားထိုးပေးသော မော်တော်ယာဉ်။
ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ - ဆိုသည်မှာ Yoma Fleet Limited အပါအဝင် Yoma Car Share ပါအပါဖြစ်သည်။
Yoma Car Share/ Yoma Fleet – ဆိုသည်မှာ မြန်မာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၁၃၄၃၆၉၃၆ ဖြင့် စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် Yoma Fleet Limited ဖြစ်ပြီး၊ ငှားရမ်းစာချုပ်၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း သို့မဟုတ် လူကြီးမင်း၏ - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့် မော်တော်ယာဉ်အား (သို့မဟုတ်) ငှားရမ်းသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အခွင့်ရယာဉ်မောင်းတို့ ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်း၏ Yoma Car Share Account - ဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းမှုစတင်ချိန်တွင် ငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်အရ ငွေပေးချေမှု အတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းသော လူကြီးမင်း၏ မြီရှင်ကဒ် (Credit Card)၊ Yoma Fleet ကျသင့်ငွေစာရင်း (သို့မဟုတ်) မြီစားကဒ် (Debit Card) ကိုဆိုလိုသည်။
Yoma Car Share ၌ ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရန် လျှောက်ထားခြင်း
လူတစ်ဦး (သို့) အဖွဲ့အစည်းတခုသည် လျှောက်လွှာကိုအွန်လိုင်း (သို့) စာရွက်တင်ခြင်းဖြင့် Yoma Car Share Account Holder အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
Yoma Car Share စာရင်းဖွင့်ရန်လျှောက်လွှာကို အောက်ပါအတိုင်းလက်ခံနိုင်သည်။
၂.၁. လျှောက်ထားသူသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်သဘောတူသည်၊
၂.၂. လျှောက်ထားသူသည် Yoma Car Share မှ လိုအပ်သည်ဟုယူဆသော လျှောက်လွှာပုံစံများအားလုံးကို ဖြည့်စွက် ရမည်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များတွင် ငွေပေးချေမှုကဒ်အချက်အလက်၊ ကော်ပိုရိတ်ငွေပေးချေမှု သဘောတူညီချက်နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အချက်အလက်တို့ပါဝင်သည်။
တစ်ဦးချင်းအကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်လျှောက်ထားသောအခါ အကောင့်ပိုင်ရှင်သည် Yoma Car Share အား အကောင့်ပိုင်ရှင်အမည်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ် အသေးစိတ်အချက်အလက်စသည့် မှန်ကန်သော သတင်းအချက် အလက်များကို ပေးရမည်။ အသင်းအဖွဲ့ အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအတွက် ၎င်းအကောင့်အောက်ရှိ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အပါအဝင် ကားငှားရမ်းခြင်း/ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ငွေပေးချေရန်သတ်မှတ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ အသင်းဝင်များ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို Yoma Car Share သို့ပေးပို့ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အသင်းဝင်စဉ်အတွင်း ၎င်းအသင်းဝင်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲများကို Yoma Car Share ၌ ပြောင်းလဲရန် အကောင့်ပိုင်ရှင်၏တာဝန်သာဖြစ်သည်
Yoma Car Share သည် အသင်းဝင်လျှောက်လွှာအသစ်များကို စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေးရာတွင် ကော်ပိုရိတ်အကောင့် များအတွက် လျှောက်လွှာပါအချက်အလက်များဖြစ်သည့် ၎င်း၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ ငွေပေးချေမှု အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်အတူ ကုမ္ပဏီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ပါဝင်သည်။ ထိုသို့ Yoma Car Share အသင်းဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်၏လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Yoma Car Share သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသင်းဝင်လျှောက်လွှာကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Yoma Car Share ၌ ယာဉ်မောင်းသူစာရင်းဖွင့်ရန် လျှောက်ထားခြင်း
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် လျှောက်လွှာကို အွန်လိုင်း (သို့မဟုတ်) လျှောက်လွှာစာရွက်ပေါ်ဖြည့်ခြင်းဖြင့် Yoma Car Share မောင်းသူအဖြစ် စာရင်းသွင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။
Yoma Car Share ကားမောင်းသူစာရင်းဖွင့်ရန်လျှောက်လွှာကို အောက်ပါအတိုင်းလက်ခံနိုင်သည်။
၂.၁. လျှောက်ထားသူသည် ဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်သဘောတူသည်။
၂.၂. လျှောက်ထားသူသည် Yoma Car Share မှ လိုအပ်သည်ဟုယူဆသောလျှောက်လွှာပုံစံများအားလုံးကို ဖြည့်စွက်ရမည်။
ယာဉ်မောင်းသူအဖြစ်လျှောက်ထားသောအခါ စာရင်းပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းသူသည် Yoma Car Share ထံသို့ ယာဉ်မောင်းသူ၏ အမည်၊ အသက်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် မောင်းနှင်မှုရာဇဝင်အစရှိသည်တို့ကို မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ပေးရမည်။ အသင်းဝင်ကာလအတွင်း အသင်းဝင်များ၏ သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲများကို Yoma Car Share ထံသို့ပေးပို့ရန်မှာ စာရင်းပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ယာဉ်မောင်း၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
စာရင်းပိုင်ရှင်သည် သူ၏ Yoma Car Share အကောင့်တွင် ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးထက်ပို၍လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အပိုဆောင်း ယာဉ်မောင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း Yoma Car Share Platform မှတဆင့် စာရင်းပိုင်ရှင်က ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်းယာဉ်မောင်းထပ်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကောင့်ပိုင်ရှင်သည် ကားမောင်းသူအား ၎င်းတို့၏ ငွေစာရင်းသို့ ငွေတောင်းခံခွင့် ခွင့်ပြုချက်ပေးရမည်။
Yoma Car Share မှ ရရှိသည့် Tap Card ကို အသုံးပြု၍ ကားများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို Tap Card ထုတ်ပေးမည်။ အကယ်၍ အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်း၏ Tap Card ပျောက်ဆုံးပါက ပြန်လည် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ယာဉ်မောင်းများသည် ၎င်းတို့၏ Tap Card ကို အသုံးပြု၍ ကားအဝင်အထွက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Tap Card သည် Yoma Car Share ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး အကောင့်ဖျက်သိမ်းခြင်း (သို့) အသုံးပြုခြင်းရပ်ဆဲပါက Tap Card ကို ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်သည်။
Yoma Car Share သည် ကားများအားလုံး၏ လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြပါ သဘောတူညီချက်စာချုပ်အောက်ရှိ အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းမှ သဘောတူညီချက်စာချုပ်အား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူ၏ ပေါ့ဆမှု၊ မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် Yoma Car Share မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
၂.၁. အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် တခြားအဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းဆိုမှု များ
၂.၂. အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းမှ ကြုံကြိုက်ရသည့် အမြတ်အစွန်းဆုံးရှုံးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကြိုတင်စုငွေဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ်
၂.၃. အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းမှ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် ခံစားရသည့် မည်သည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမျိုးမဆို ဖြစ်သည်။
မော်တော်ယာဉ်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ယာဉ်မောင်းမှသာ မောင်းနှင်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အသင်းဝင်ယာဉ်မောင်းများသာလျှင် Yoma Car Share ၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကာအကွယ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်း သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းတို့၏ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသော ယာဉ်မောင်းအား Yoma Car Share မှ မော်တော်ယာဉ်များအား မောင်းနှင့်ခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော မည်သည့်ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုမျိုးမဆို အကောင့်ပိုင်ရှင်များမှ တာဝန်ယူရမည်။
ယာဉ်မောင်းများသည် အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် ကားအသုံးပြုခြင်းများကို ခွင့်မပြုပါ -
၃.၁. ပြန်လည်ငှားရမ်းခြင်း သို့ ဆုလာဘ်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း
၃.၃. လေးဘီးမောင်းယာဉ် (Four-Wheel Drive - 4WD) မဟုတ်ပါက မည်သည့်လမ်းပေါ်တွင်မဆို လမ်းကြမ်း မောင်းနှင်ခြင်း၊ လမ်းမရှိသည့်နေရာတွင် မောင်းနှင်ခြင်း၊ အချောမသတ်ရသေးသည့် ပြုပြင်ဆဲလမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင်ခြင်း
၃.၆ မမှန်ကန်မသင့်လျော်သော မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမဆို သယ်ဆောင်ခြင်း၊ ဝန်ပိုတင်ရန် မဟုတ်သော မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို့ ဝန်ပိုတင်ဆောင်ခြင်း
၃.၇. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်ပိုင်နက်နယ်နိမိတ်ပြင်ပသို့ မောင်းနှင်ခြင်း
အကောင့်ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းများသည် ကား သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုရောင်းချခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) မည်သူ့တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ကားနှင့် ပတ်သက်သော တရားဝင်အခွင့်အရေးများပေးရန် ကြံစည် အားထုတ်ခြင်းများ မပြုရ။
မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲ၍ မော်တော်ယာဉ်အား မောင်းနှင်ခြင်းမပြုရ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်းလမ်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် သက်ဆိုင်သော တရားဝင် အရက်သေစာ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။
ယာဉ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်လူဦးရေထက်ကျော်လွန်၍ တင်ဆောင်မောင်းနှင်ခြင်း မပြုရ။
ယာဉ်မောင်းသည် မော်တော်ယာဉ်သို့ ဝန်ပိစေသော ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုရ။
Yoma Car Share ပိုင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် အခြားမော်တော်ယာဉ်အား ဆွဲယူ၊ သယ်ဆောင်ခြင်း မပြုရ။
ယာဉ်မောင်းသူသည် ကား၏ချွတ်ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုကို သတိပြုမိလျှင် ယာဉ်မောင်းသည် Yoma Car Share ၏ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု Call Center သို့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ ကားအတွင်းပိုင်းပျက်စီးမှု (သို့) ကား၏ အခြေအနေအသေးစိတ်ကို ဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ်မှ တဆင့်သတင်းပို့ရမည်။
ကားတစ်စီးကို မသန့်ရှင်းသော အဝတ်များဖြင့် သန့်ရှင်းရေး အလွန်အကျွံလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကားမောင်းသူ အသုံးပြုမှုကြောင့် ကားအတွင်းခန်း၌သော်လည်းကောင်း ပြင်ပ၌သော်လည်းကောင်း ပျက်စီးမှုရှိပါက အကောင့်ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
ယာဉ်မောင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် ဥပဒေများ၊ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကားကို မောင်းနှင်ရမည်။
ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်သော မည်သည့်အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်း၏ အသင်းဝင်အခွင့်အရေးကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့မှ ချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ဆိုင်းငံ့မှုအပေါ်တွင် အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းအောက်ရှိ ပြုလုပ်ပြီးသားကြိုတင်ငှားရမ်းမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးသည် အချိန်တစ်ခုတွင် ကားတစ်စီးသာ ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
တတိယပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို အကောင့်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်း၏ ကိုယ်စား ကားတစ်စီးကို ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်း မပြုရပါ။ ကော်ပိုရိတ်အကောင့်မန်နေဂျာမှသာလျှင် ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ အခြားယာဉ်မောင်း တစ်ဦးအတွက် ကားကြိုတင်ငှားရမ်းနိုင်သည်။
ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်းကို အချိန်မရွေး အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ၊ ဖုန်းနံပါတ် 09 YOMAFLEET (09 966235338) သို့ ခေါ်ယူ၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်နိုင် သည်။
ဖုန်း သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဖြင့် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် ငှားရမ်းခြင်းအတည်ပြု အီးမေးလ်ကို ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ပါ အချက်အလက်များသည် ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်း အတည်ပြု အီးမေးလ်များကို အတည်ပြုစစ်ဆေးရန် အဖွဲ့ဝင်များ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်းမတိုင်မီ ၁၅ မိနစ်အလိုတွင် စရံငွေ ကျပ် ၃၀၀,၀၀၀ နှင့် ခရီးစဉ်စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေကို Credit Card အသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းငွေပမာဏကို ၎င်း၏ credit card တွင် ခရီးပြီးသည်အထိ တားဆီးထားမည်ဖြစ်ပြီး Debit Card နှင့် WavePay အသုံးပြုသူများအတွက် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုပြုလုပ်သည် နှင့် တပြိုင်နက် ငွေပေးချေစနစ်ဖြစ် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်အဆုံးတွင် ကြိုတင်ပေးချေထားသော ငွေပမာဏ သို့မဟုတ် ပေးချေထားသော ငွေပမာဏကို ခရီးစရိတ်ကုန်ကျငွေအပေါ် မူတည်၍ ငွေပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထပ်မံနှုတ်ယူခြင်း စသည်ဖြင့် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုပြုလုပ်ထားသော မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်ကိုမဆို လဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် ကားရပ်နားရန်နေရာ၌ အခြားကားတစီးကို ထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
သင် ကြိုက်နှစ်သက်သောကြိုတင်ငှားရမ်းချိန် မတိုင်မီ ကားရရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အာမမခံနိုင်ပါ။
အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းသည် ကားအသုံးမပြုမီ ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ငှားရမ်းရမည်။
အနည်းဆုံးငှားရမ်းကာလသည် မိနစ် ၆၀ ဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းကာလကို တစ်ကြိမ်လျှင် မိနစ် ၃၀ ထပ်တိုးနိုင်သည်။
ယာဉ်မောင်းများသည် ကားများကို ငှားရမ်းကာလအတွင်းသာ အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
အကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းများသည် ငှားရမ်းခြင်းကို ၆ လ ကြိုတင်၍ စာရင်းသွင်းငှားရမ်းနိုင်သည်။
ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု မတိုင်မီ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ငှားရမ်းခြင်းကို ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
စတင်အသုံးပြုပြီးပါက ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုကို ဖျက်သိမ်း၍ မရပါ သို့သော် ငှားရမ်းမှုကို စောလျင်စွာ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
အကောင့်ပိုင်ရှင်သည် တစ်လလျှင် ၃ ကြိမ်တိုင် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုစာရင်းအား အခမဲ့ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ Yoma Car Share အနေဖြင့် လွန်စွာ ကြိုတင်ငှားရမ်းခြင်း ဖျက်သိမ်းမှုပြုလုပ်သူအား အသင်းဝင်အဖြစ်မှရပ်ဆိုင်ခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ၃ ကြိမ်အထက် ပယ်ဖျက်သော ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုများအား ကျပ် ၁၀၀၀၀ အနည်းဆုံး သို့မဟုတ် ခရီးခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်၏ ၁၀% ကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ်ကောက်ယူ တောင်းဆိုနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီအကောင့်ပိုင်ရှင်များအား ငှားရမ်းမှုဖျက်သိမ်းခြင်းဒဏ်ကြေး မကောက်ခံပါ။
ယာဉ်မောင်းသည် ကားငှားရမ်းရယူသည့် အချက်အချာတည်နေရာမှ ကားကိုသွားရောက်ရယူနိုင်သည်။
ငှားရမ်းခြင်းကာလမစတင်မီ ကား၏အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းအခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်းအပြင်၊ ကားဆီဖြည့်ကဒ်နှင့် လောင်စာဆီ ပမာဏတို့ကို စစ်ဆေးရန်မှာ ယာဉ်မောင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းခြင်းကာလအစတွင် မည်သည့်အပျက်အစီးအဆုံးအရှုံးကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားရန်ပျက်ကွက်ပါက ငှားရမ်းခြင်းကာလအစတွင် ကား၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေကောင်းမွန် ကြောင်း သင်ကလက်ခံ‌သည်ဟု ယူဆမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု စတင်ပြီးနောက် အကြောင်းကြားသောအရာသည် ယာဉ်မောင်း၏တာဝန်သာဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပြီး ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက် ယာဉ်မောင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အကောင့်ပိုင်ရှင်မှတာဝန်ယူရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းမှ ကြိုတင်ငှားရမ်းထားသည့်နေ့တွင် ကြိုတင်ငှားရမ်းထားသော ကားရှိရမည်ဟု အာမမခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကားရရှိနိုင်မှုပေါ် မူတည်ပြီး ကားအစားထိုး ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ၊ လူကြီးမင်း၏ တောင်းဆိုချက်အရ ကြိုတင် ငှားရမ်း ထားသည့် ကားအမျိုးအစားပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်၍ နှုန်းထားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အသုံးပြုနေစဉ်ကာလ အတောအတွင်းသာမက ကားငှားရမ်းခြင်း ကာလတစ်ခုလုံးတွင် ဖြစ်ပျက်သမျှ ယာဉ်၏ မည်သည့် အဖြစ်အပျက်မဆို ယာဉ်မောင်းသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ဤတာဝန်တွင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှ တာဝန်မယူနိုင်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ အပါအဝင် ထိုထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအပေါ် အပိုပေးဆောင်ရန်မှာ ယာဉ်မောင်းသူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းကာလအတွင်း ယာဉ်မောင်းများသည် ယာဉ်၏ ချို့ယွင်းချက်တစုံတရာ သို့မဟုတ် မောင်းနှင်အသုံးပြုရန် စိတ်ချရသည့် အခြေအနေမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ချက်ချင်းဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရမည်၊
ကားများ ဆီဖြည့်သည့်အခါတွင်လည်း မှန်ကန်သည့် လောင်စာဆီအမျိုးအစားကိုသာ အသုံးပြုရမည်။
ယာဉ်အတွင်း ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား လှောင်အိမ်ဖြင့်သာသယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် အပိုသန့်ရှင်းရေးခ ပေးဆောင်ရမည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဓာတုပစ္စည်းများ အပါအဝင် အနံ့ပြင်းသော ငါးခြောက်၊ မျှစ်၊ ဒူးရင်းသီး စသည့်အစားအစာများ တင်ဆောင်ခြင်းကိုလည်း တားမြစ်ထားသည်။ ယာဉ်ပေါ်တွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အား လှောင်အိမ်ဖြင့် သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုပါက သန့်ရှင်းရေးအခကြေးငွေကို လူကြီးမင်းမှ ပေးဆောင်ရမည်။
ယာဉ်မောင်းများသည် ငှားရမ်းကာလတွင် ကားကို အသုံးမပြုပါက ထိပုတ်ကဒ်ကိုအသုံးပြု၍ သော့ပိတ်ထားရမည်။
လူကြီးမင်းသည် ငှားရမ်းကာလအတွင်း ပေးဆောင်ရမည့် ဒဏ်ငွေ၊ ဝန်ဆောင်ခ အခကြေးငွေစသည်တို့ အပါအဝင် အဝေးအပြေးလမ်းမကြီး သို့မဟုတ် အခြားသက်ဆိုင်သောလမ်းများ အသုံးပြုခြင်းအတွက် ကျသင့်သော အခွန်အခများကို ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
ငှားရမ်းကာလအတွင်း ဖုန်းမကိုင်သော ယာဉ်မောင်းများအား အကူအညီအထောက်အပံ့မပေးနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်နှုန်းထားတွင် လောင်စာဆီ အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး လောင်စာဆီဖြည့်ရန်အတွက် လောင်စာဆီကဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကားပြန်လည်အပ်နှံသောအခါ ယာဉ်၏ လောင်စာဆီပမာဏသည် အနည်းဆုံးလက်ကျန် လေးပုံတပုံ ရှိရမည်။
အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းတဦးသည် ကျွန်ုပ်တို့ပိုင် လောင်စာဆီကဒ်ကို အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၎င်းယာဉ်မောင်းအား အခွင့်ရယာဉ်မောင်းအဖြစ်မှ ရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မတော်တဆမှု ကိစ္စရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သော အခကြေးငွေအားလုံးကို လူကြီးမင်းဘက်မှပေးချေရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လောင်စာဆီကဒ် ပျက်နေလျှင် သို့ ပျောက်ဆုံးနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ လောင်စာ ဆီကဒ်ကို လက်ခံသော လောင်စာဆီအရောင်းဆိုင်များမရှိပါက ယာဉ်မောင်းက လောင်စာဆီအတွက်ငွေပေးချေပြီး ကျွန်ုပ်ထံမှ ပြန်လည်တောင်းခံနိုင်သည်။ ပြန်အမ်းငွေရယူရန်အတွက် ယာဉ်မောင်းသည် လောင်စာဆီအတွက် ကျသင့်ငွေ တောင်းခံလွှာကို ခရီးစဉ် မပြီးဆုံးမီ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ လောင်စာဆီ ဝယ်ယူမှုကျသင့်ငွေ ပမာဏကို လူကြီးမင်း၏ ငွေတောင်းခံလွှာမှ နှုတ်ယူ ပေးမည်ဖြစ်သည်။ လောင်စာဆီကဒ် ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ 09 YOMAFLEET (09 966235338) ထံသို့ အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။
မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ခိုးမှု
အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းသည် မတော်တဆမှုတခုခုဖြစ်ခဲ့လျှင်
၁.၁. ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု တစုံတရာရှိလျှင် သို့မဟုတ် လက်မခံနိုင်သော သဘောထားကွဲလွဲမှု တစုံတရာရှိပါက ကားကို လုံခြုံစွာထားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာရဲကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
၁.၂. မတော်တဆမှုတွင် ပါဝင်သော အခြားယာဉ်မောင်းများ၏ ကားမှတ်ပုံတင်၊ အမည်၊ လိပ်စာနှင့် လိုင်စင်နံပါတ်များကို မှတ်သားထားပါ။
၁.၃. မျက်မြင်သက်သေများ၏ အမည်နှင့်လိပ်စာများကို မှတ်သားထားပြီး
၁.၄. ကျွန်ုပ်တို့၏ 09 YOMAFLEET (09 966235338) သို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ယာဉ်မတော်တဆမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော မည်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ၄၈ နာရီအတွင်း ပေးပို့ရမည်။ အထက်ပါအချက်အလက်များကို ချန်လှပ်ထားခြင်းမရှိဘဲ မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ထားသော ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပျက်ပုံ အစီရင်ခံစာကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ၂၄ နာရီအတွင်း ပေးပို့ရမည်။
ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် မှန်ကန်တိကျသော ထွက်ဆိုချက်များကို ထွက်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်မယူနိုင်ပါက အပိုဆောင်းကျသင့်ငွေကို ပေးဆောင်ရန်မှာ ယာဉ်မောင်း၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
ကားနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ပျက်စီးမှုမဆို ကျွန်ုပ်တို့၏ 09 YOMAFLEET (09 966235338) သို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ ကားရှိရာသို့ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အကူအညီ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းအား အခြားကားဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းကာလအတွင်း ကားအသုံးပြုမှုကို တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လူ၏လုံခြုံမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ပြဿနာ တစုံတရာပေါ်ပေါက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ 09 YOMAFLEET (09 966235338) သို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပြီး လမ်းစည်းကမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ကားရပ်ထားရမည်။
ယာဉ်ရပ်နားခြင်းနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်း ပြစ်ဒဏ်များအပြင် ယာဉ်ရပ်နားလက်မှတ်၊ အရှိန်လွန်မောင်းနှင်ခြင်း ဒဏ်ငွေ၊ ယာဉ်မရပ်ရနေရာတွင် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဒဏ်ငွေ၊ အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းဒဏ်ငွေနှင့် ယာဉ်ရပ်နားကွင်းများတွင် ယာဉ်ရပ်နားခများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကျသင့်ငွေအားလုံးကို လူကြီးမင်းမှပေးဆောင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယာဉ်ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားစာကိုရရှိပါက -
၂.၁. ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရန်အတွက် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအသိပေးစာ မရမှီ သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းသူသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကို အသိပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၂.၂. ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုမပြုမှီ ပြစ်မှုဆိုင်ရာအသိပေးချက်အတွက် တာဝန်ယူမှုကို သက်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းသူအား လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယာဉ်ရပ်နားခြင်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာ အသိပေးစာကို လက်ခံရရှိပြီး ငွေပေးချေမှုမတိုင်မီ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ အသိပေးချက်အတွက် တာဝန်ယူမှုကို သက်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းထံသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါက ပြစ်မှုအသိပေးစာ၏ ကုန်ကျစရိတ် အတွက် လူကြီးမင်းတွင်တာဝန်ရှိသည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည် ငှားရမ်းအသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်း စီးပွားဖြစ်ကားရပ်နားရန်နေရာ၌ ရပ်နားခြင်းရှိပါက ယာဉ်ရပ်နားခကို လူကြီးမင်းမှ တာဝန်ယူရမည်။
ကားအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပိုင်းအခြေအနေ မူလပကတိအနေအထားဖြင့် ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး လောင်စာဆီပမာဏမှာလည်း အနည်းဆုံးလက်ကျန် လေးပုံတပုံ ရှိရမည်။
အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းသည် ကားကို ငှားရမ်းကာလ ကျော်လွန်၍ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အကောင့်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ကားငှားရမ်းခအပြင် နာရီအလိုက် နောက်ကျကြေးငွေပါ ပေးဆောင်ရမည်။
၂.၁. အကောင့်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ကြိုတင်ငှားရမ်းကာလကို ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး ငှားရမ်းမှုအသစ် မစတင်ဘဲ ထပ်မံ၍ သက်တမ်းမတိုးနိုင်ပါ။
၂.၂. အကောင့်ပိုင်ရှင်၏ခရီးစဉ်အရ ငှားရမ်းသက်တမ်းတိုးခြင်းကို တစ်ကြိမ်သာ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ငှားရမ်းသက်တမ်း တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှုအသစ်ပြုလုပ်ရန်နှင့် ရရှိနိုင်သည့်ယာဉ်အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တောင်းဆိုပါသည်။
၂.၃. ငှားရမ်းသက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက် သက်တမ်းတိုးခ ၁၀,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း တိုးမြှင့်ထားခြင်းမရှိပါက မော်တော်ယာဉ် ပြန်လည်အပ်နှံချိန်အထိ နောက်ကျကြေးငွေအဖြစ် မိနစ် ၃၀ လျှင် ၂,၅၀၀ ကျပ် ကောက်ခံမည် ဖြစ်သည်။
၂.၄. သက်တမ်းကြိုတင်တိုးမြှင့်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်လျော်သောမော်တော်ယာဉ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် မဆို အစားထိုးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂.၅ လက်ရှိ ငှားရမ်းကာလအား (၇)ရက်နှင့်အထက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အကောင့်ပိုင်ရှင်အား အပိုစရံငွေထပ်မံတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုစရံငွေအား ခရီးပြီးဆုံးသောကာလအတွင် ခရီး၏ ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မူတည်၍ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အညီ ထပ်မံကောက်ခံနိုင်သည်။
ငှားရမ်းကာလအဆုံးသတ်ပြီးနောက် ယာဉ်မောင်းများသည် ယာဉ်မှမထွက်ခွါမီ ကားတံခါးများအားလုံး သော့ပိတ်ထားရန် သေချာ စစ်ဆေးရမည်။ အကယ်၍ ငှားရမ်းကာလအဆုံးသတ်တွင် ယာဉ်မောင်းသူမှ ကားတံခါး မပိတ်ထားမိသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှံးခြင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှတောင်းခံနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကား၏သန့်ရှင်းရေးအခြေအနေသည် နောက်လူဆက်လက်အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်သည့်အနေအထားတွင် ရှိပါက လိုအပ်သော သန့်ရှင်းရေးခကျသင့်ငွေကို လူကြီးမင်းမှ ကျခံရမည်။ အလွန်အကျူး မရှင်းစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကားများကို ငှားရမ်းအသုံးပြု သော အကောင့်ပိုင်ရှင်များအား အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခွင့်ရှိသည်။
ယာဉ်မောင်းများသည် ငှားရမ်းကာလအဆုံးတွင် သတ်မှတ်ထားသော အချက်အချာနေရာသို့ ကားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် သေချာအောင်ပြုလုပ်ရမည်။ အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းသည် အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကားရပ်ရန် ဖိအားပေးခံရပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ကား၏တည်နေရာအတိအကျကို ဖုန်းဖြင့်ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။ ငှားရမ်းကာလအတွင်း ယာဉ်မောင်းများသည် ကားများကို တရားဝင်ကားရပ်နားရန်နေရာ၌သာ ရပ်နားရမည်ဖြစ်ပြီး အခကြေးငွေပေးဆောင်ရသော ကားရပ်နားရန် နေရာအတွက် ကျသင့်သော မည်သည့်ယာဉ်ရပ်နားခကိုမဆို ပေးဆောင်ရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းများမှ တရားမဝင် ယာဉ်ရပ်နားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကားရပ်နားခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးစာကိုရရှိပါက လူကြီးမင်းမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်။
ယာဉ်မောင်းသူများသည် ငှားရမ်းအသုံးပြုကာလမပြီးဆုံးမီ ကား၏အလင်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံး၏ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံး ကို ပိတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကား၏ဘက်ထရီကို အသုံးပြုသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ပွင့်နေပါက ပြင်ဆင်စရိတ်အတွက် ကုန်ကျငွေကို လူကြီးမင်းထံမှ ကျွန်ုပ်တို့က တောင်းခံနိုင်သည်။
ယာဉ်မောင်းသူများသည် ကားကို စတင်ငှားရမ်းသည့်အနေအထားတိုင်းပြန်အပ်နှံရမည်။ ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာများ၊ ကားအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ ဥပမာ ကားထိုင်ခုံ၊ ကားခါးပတ်၊ ကြမ်းခင်း၊ တာယာအပိုနှင့်ပစ္စည်းများကို ယူဆောင် ဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုရ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ ကားတွင်ထည့်ထားသည် အခြားသောပစ္စည်းများဖြစ်သည့် မီးသတ်ဗူး၊ ဆေးအိတ်၊ ကားလိုင်စင်၊ ဘီးခွန်၊ ဆီကဒ် သို့မဟုတ် ဆီစာအုတ် နှင့် အခြားသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကားအတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်ပိုင်းတွင် ကပ်ထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ တံဆိပ်အမှတ်အသား စတစ်ကာများကိုလည်း ပယ်ဖျက်ခြင်းဖျက်စီးခြင်းများမပြုရ။ ဤအပိုဒ်တွင်ဖေါ်ပြထားသော ပစ္စည်းများအား နဂိုမူလအတိုင်းပြန်အပ်နှံခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ ယာဉ်မောင်းအားဖြစ်စေ အကောင့်ပိုင်ရှင်အားဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အား ဒဏ်ကြေးငွေကောက်ခံခွင့်ရှိသည်။
ငှားရမ်းကာလအဆုံး၌ ကားထဲ၌ မည်သည့်ပစ္စည်းမှ မကျန်ရှိစေရန် ယာဉ်မောင်းများမှ စစ်ဆေးရမည်။ မည်သည့် ကျန်ရှိပစ္စည်းမဆို ကျွန်ုပ်တို့မှ တာဝန်မယူပါ။ အကယ်၍ ကားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းတစုံတရာတွေ့ရှိပါက ရက်ပေါင်း ၃၀ အထိ ထိန်းသိမ်းထားပေးမည် ဖြစ်သည်။ ၃၀ ရက် ကျော်လွန်ပါက ပစ္စည်းအားလုံးကို လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းသည် ငှားရမ်းကာလပြီးနောက် ကျန်ရှိသည့်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရယူလိုပါက သော့မဲ့စနစ်ကို ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Yoma Car Share 09 YOMAFLEET (09 966235338) သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည် ။
အကယ်၍ ယာဉ်မောင်းသည် ငှားရမ်းထားသောကားကို ပြန်လည်အပ်နှံချိန်၌ ကျွန်ုပ်တို့အား ကြိုတင်အကြောင်းကြား ခြင်းမရှိပဲ လက်ဝယ်ထားရှိပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါက ကားခိုးယူခံရခြင်းဟုမှတ်ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာရဲဌာနသို့ အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်သည်။ ကားကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အချိန်ကာလတစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် ကားကို ပြန်လည်ရယူသည့် အချိန်ကာလအထိ ကျွန်ုပ်တို့မှ စောင့်ဆိုင်းရသည့် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ယာဉ်မောင်းသူထံမှ စရိတ်တောင်းခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယာဉ်မောင်းအား အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အကောင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ကားထဲတွင်ကျန်ရှိသော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အခကြေးငွေနှင့် ဒဏ်ငွေပေးချေမှုများအတွက် ကားကိုပြန်လည်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကားပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းဆိုမှုများကို လူကြီးမင်းမှ လျော်ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအစီအစဉ်များနှင့် သတ်မှတ်နှုန်းထားများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သိရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကားငှားရာတွင် မည်သည့်ဈေးနှုန်းကိုမဆို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းများမပြုလုပ်ပဲ ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ယာဉ်မောင်း အားလုံးအသုံးပြုသော နာရီလိုက်အသုံးပြုနှုန်း၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုနှုန်းနှင့် ကီလိုမီတာနှုန်း စသည့် ကျသင့်ငွေအားလုံးကို လူကြီးမင်းမှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နာရီလိုက်အသုံးပြုနှုန်း၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုနှုန်းနှင့် ကီလိုမီတာနှုန်းထားတို့သည် လူကြီးမင်း၏ ကြိုတင်ငှားရမ်းကာလနှင့် ငှားရမ်းသော ယာဉ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။
စျေးနှုန်းများသည် အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ငှားရမ်းခြင်း အတည်ပြု သဘောတူညီချက်ပေါ်ရှိ ဈေးနှုန်းသည် နောက်ဆုံး ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်း၍မရပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်သတ်မှတ်နှုန်းထားအချက်အလက်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် www.yomacarshare.com သို့မဟုတ် ဖုန်း application တွင်ရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရံဖန်ရံခါ အထူးဈေးနှုန်းများကို ပေးနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များ ပါဝင်သော အထူးကမ်းလှမ်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် www.yomacarshare.com တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်ကမ်းလှမ်းမှု အခြေအနေကိုမဆို သတိပြုရန်နှင့် လိုက်နာရန်မှာ အသင်းဝင်၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
မတော်တဆမှုများ သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပေးဆပ်ရမည့် အခကြေးငွေ လျော်ကြေးကို တတိယပုဂ္ဂိုလ်မှ တာဝန်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါက လူကြီးမင်း သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းအတွက် တာဝန်ယူရန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ထက်မပိုသော ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ သို့သော် လူကြီးမင်းမှ ပထမ မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုမှ ၃လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် မတော်တဆမှုများ သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပွားလာပါ လူကြီးမင်းသည် ယာဉ်ပြင်ဆင်မှုများအပါအဝင် အခြားသော ဆုံးရှုံးမှုများ၏ ၅၀% လျော်ကြေးကို Yoma Car Share သို့ ပေးချေရန်တာဝန်ရှိပြီး တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အခြားမတော်တဆမှုတွင်ပါဝင်သူများအား ပေးရမည့် ၁၀၀% အခကြေးငွေ အဝဝမှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းသည် ပထမဆုံးမတော်တဆမှုမှ ၃လအတွင်း တတိယအကြိမ်နှင့်နောက်ပိုင်း မတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားပါက ယာဉ်ပြုပြင် ပြင်ဆင်မှုနှင့် အခြားသော ဆုံးရှုံးမှုများကို Yoma Car Share နှင့် အခြားမတော်တဆမှုတွင် ပါဝင်သူများအား ဆုံးရှုံးမှုအခကြေးငွေလျော်ကြေးအပြည့်အဝပေးဆောင်ရမည်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်အပြည့်အဝဖြစ်ပြီး Yoma Car Share နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ တရားမဝင် အသုံးပြုမှုအတွက် မည်သူမျှ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အကာအကွယ်မူဝါဒမျှ ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လူတစ်ဦးအား ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်ရယာဉ်မောင်းဖြစ်လာစေရန် ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အကာအကွယ် မူဝါဒအောက်တွင် မ ောင်းနှင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ ခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယာဉ်မောင်းသည် ကား၏ အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းများ ခိုးယူခံရခြင်းအတွက် အကာအကွယ်မူဝါဒ မရရှိနိုင်သလို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုအတွက်လည်း အကာအကွယ်မူဝါဒသည် အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဖော်ပြပါ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိစ္စရပ်များအတွက် လူကြီးမင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို ပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည် (အထက်ဖေါ်ြပပါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀နှင့်ညီမျှသော အာမခံမူဝါဒနှင့် အကျုံးမဝင်သော ထိခိုက်မှု၊ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေများ) -
၄.၁. ယာဉ်မောင်းသည် ရဲအရာရှိများ မရောက်လာမီ သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်အား သက်ဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိများထံ မတင်ပြမီ မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာအရပ်မှ ထွက်ခွာသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် တခြားအဖွဲ့ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှု
၄.၂. ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ၊ GPS စနစ်နှင့် ကားသော့များအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့မှ ထောက်ပံ့ပေးသော မည်သည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အဝဝ
၄.၃. မမှန်ကန်သော လောင်စာဆီအမျိုးအစားအား အသုံးပြုသည့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု
၄.၄. ယာဉ်မောင်းမှ ယာဉ်စည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ယာဉ်မတော်တဆမှု
၄.၅. ခွင့်မပြုထားသည့် ယာဉ်မောင်း သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိသော အဖွဲ့ဝင်ယာဉ်မောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော မတော်တဆမှု
၄.၆. ယာဉ်မောင်း၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော မတော်တဆမှု
၄.၇. ယာဉ်အောက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ယာဉ်ခေါင်မိုး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် ဆုံးရှုံးမှုအကာအကွယ်မူဝါဒသည် အကျုံးဝင်မည် မဟုတ်ပါ
၄.၁၀. မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အကြောင်းမကြားသော မတော်တဆမှု။
၅.၁. ပြင်ဆင်၍မရသော တာယာပျက်စီးခြင်းဆိုသည်မှာ - တနည်းအားဖြင့် ကားတာယာသည် ၎င်း၏ သက်တမ်းအတိုင်း အသုံးမပြုနိုင်တော့လျှင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအား ကျွန်ုပ်တို့မှ တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တာယာနှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒမှာ လက်ရှိတာယာသည် ကီလိုမီတာ ၄၀,၀၀၀ သက်တမ်းပြည့်သည့်အခါတိုင်း တာယာအသစ် လဲလှယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အစားထိုးမရသော တာယာပျက်စီးခြင်းအတွက် လူကြီးမင်းမှ ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏကို တာယာသက်တမ်းပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှ မျှတစွာ တွက်ချက် တောင်းခံပေးမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်မဆို ငွေပေးချေမှုအတွက် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ ထိုအခကြေးငွေ ပေးချေမှုနည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် Yoma Fleet Limited ဘဏ်စာရင်းသို့ လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ်အကောင့် ပေးဆောင်ရမည့် သဘောတူညီချက်အတိုင်း ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းသည် ပထမဆုံး ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမပြုမီ ငွေပေးချေမှုအတွက် လူကြီးမင်း၏ ဒက်ဘစ်ကဒ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးရမည်။ ကဒ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အပြောင်းအလဲရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ ငှားရမ်းမှုမစတင်မီ လူကြီးမင်း၏ ငွေပေးချေကဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ခွင့်မပြုနိုင်ပါက လူကြီးမင်းသည် ကားကို သော့ကိုဖွင့်၍ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးခြင်းသည် ကျသင့်သော ဝန်ဆောင်ခအားလုံးကို လူကြီးမင်း၏ကဒ်မှ နှုတ်ယူခွင့်ပြုရန် လူကြီးမင်းမှ သဘောတူခြင်းဖြစ်သည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ငှားရမ်းခြင်းမတိုင်မီ ၁၅ မိနစ်အလိုတွင် စရံငွေပမာဏ ၃၀၀,၀၀၀/ ကျပ်နှင့်အတူ ခရီးစဉ် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို လူကြီးမင်း၏ခရက်ဒစ်ကဒ်မှ ကြိုတင်နှုတ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့် WavePay အကောင့် ကိုင်ဆောင် သူများအနေဖြင့် စရံငွေနှင့် စုစုပေါင်းခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ငွေပေးငွေယူစနစ်ဖြင့် ပေးချေနိုင်သည်။ လူကြီးမင်း၏ ကြိုတင် ငှားရမ်းခြင်းသည် အတည်ပြုချက်ကို လက်ခံရရှိပြီးမှာသာ ငှားရမ်းမှု အောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းသည် ငွေပေးချေကဒ်ကို ငြင်းဆန်ပါက လူကြီးမင်းအား အကြောင်းကြားပါမည်။ ကော်ပိုရိတ်အသင်းဝင်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းမှ ကြိုတင်ငှားရမ်း ခြင်းကိစ္စရပ်အား အတည်ပြုပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် - ကော်ပိုရိတ် ကားငှားမှုတွင် စရံငွေသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
လူကြီးမင်းမှ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ပေးပို့သည့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကဒ်ကို ကဒ်ထုတ်ပေးသူ သို့မဟုတ် ဘဏ် သို့မဟုတ် WavePay မှ ငြင်းပယ်ထားခြင်းခံရခြင်း သို့မဟုတ် ကော်ပိုရိတ်အကောင့်သည် ငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်ပါရှိသော နေ့စွဲအတိုင်း ငွေပေးချေမှုမပြုခြင်း များ ဖြစ်ပွားလာပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောယာဉ်မောင်းများ၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်များအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိသည်အထိ ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း၊ ကဒ် သို့မဟုတ် ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်တို့အား ကဒ်ထုတ်ပေးသူ သို့မဟုတ် ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းမှ ငြင်းဆိုထားခြင်းခံရသော ၊ အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေသာ ကျန်ရှိသော အကောင့်ပိုင်ရှင်များ အောက်ရှိ ယာဉ်မောင်းများအားလုံး၏ ကားအသုံးပြုခွင့်ကို ငွေပေးချေမှုအပြည့်အဝလက်ခံရရှိသည်အထိ ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်သည် ခွင့်ပြုထားသော အကြွေးငွေသက်တမ်းကာလအတွင်း လက်ကျန်ငွေပေးချေမှုကို အပြည့်အဝမပေး ချေနိုင်ပါက ပေးချေမှုမပြုလုပ်မချင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကော်ပိုရေးရှင်းအကောင့်ရှိ ယာဉ်မောင်းများအားလုံးကို ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ ကျန်ရှိနေသေးသော လက်ကျန်ငွေသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားလျှင်၊ နောင်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်များကိုမဆို ငှားရမ်းရန် လူကြီးမင်း၏ ငှားရမ်းနိုင်စွမ်းကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းမှုတိုင်း၏အဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကားငှားရမ်းခ၊ ကီလိုမီတာနှုန်းထား ကျသင့်ငွေပမာဏများနှင့် အပိုထပ်ဆောင်း အခကြေးငွေများအပြင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အပိုဆောင်း အခကြေးငွေများအတွက် လူကြီးမင်း၏ ငွေစာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်၊ ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။ ကော်ပိုရိတ်အကောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်ငှားရမ်းခ၊ ကီလိုမီတာနှုန်းထားကျသင့်ငွေများနှင့် ကြိုတင်ငှားရမ်းကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသော အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သော ငွေတောင်းခံလွှာများကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့ပါမည်။
အကောင့်ပိုင်ရှင်နှင့်ယာဉ်မောင်း၏ သဘောတူညီချက်ပါ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များအရ လူကြီးမင်းမှ အဆိုတင် သွင်းထားသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို တွက်ချက်ထားသော အခကြေးငွေအားလုံး လက်ဝယ်ရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ တရားဝင်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် ကားခိုးခံရခြင်း၊ ယာဉ်ပျက်စီးခြင်း၊ ယာဉ်ရပ်နားခြင်းနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများအတွက် မည်သည့်ဒဏ်ကြေးနှင့် တရားရုံးကုန်ကျစရိတ်မဆို ပါဝင်သည်။
ငှားရမ်းမှုအခကြေးငွေ၊ ပျက်စီးဆုံးရှံးခြင်း၊ ကားရပ်နားခြင်းနှင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း ဒဏ်ကြေးငွေများအပါအ၀င် ပေးဆောင်ရမည့် မည်သည့်အခကြေးငွေမဆို သတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက လူကြီးမင်းတို့အား ကျွန်ုပ်တို့မှ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမီဒီယာများတွင် ငွေစာရင်းကိုင်ဆောင်ထားသူများမှ ငွေပေးချေမှုကို ပျက်ကွက်ကြောင်းကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန် ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဖော်ပြပါ ကြေငြာချက်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အများပြည်သူသို့ လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များဖြစ်သည့် လူကြီးမင်း၏ အမည်၊ မွေးရက်၊ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အပါအဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီ၏ပုံစံ(၂) အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အကြွေးတင်သည့် ငွေပမာဏကို အများပြည်သူသို့ ဖော်ပြနိုင်သည်ကို လူကြီးမင်းမှ သဘောတူနားလည်ပြီးဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းသည် ကြိုတင်ငှားရမ်းခ၊ ကားရပ်နားခနှင့် ပြစ်ဒဏ်ကြေးငွေများ အားလုံးကို ပေးဆောင်ပြီး ကားကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြန်လည်အပ်နှံပြီးနောက် ၄၈ နာရီအတွင်း ကြိုတင်နှုတ်ယူထားသော စရံငွေ ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် အား ပြန်လည်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အငြင်းပွားဖွယ် ကိစ္စတစုံတရာရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် စရံငွေကို နှုတ်ယူထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကြိုတင်ငှားရမ်းချိန်ထက် စောလျင်၍ ငှားရမ်းချိန်ကို အဆုံးသတ်ပါက အခြားသော ကောက်ခံရန် ကိစွအခြေအနေ များမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ၄၈ နာရီအတွင်း လူကြီးမင်းအား ပိုလျှံသောငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းမည်။
ပြန်လည်ငွေလက်ခံရရှိမှုသည် ငွေပေးချေမှုပေါ်တယ် သို့မဟုတ် ကဒ်ထုတ်ပေးသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းငွေကို လူကြီးမင်း၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ မည်သည့်နေ့ရက်တွင် ပြန်လည်ပေးသွင်းမည်နှင့် ပြန်အမ်းငွေရရန်နှောင့်နှေးမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ မသက်ဆိုင်ပါ၊ သတာဝန်မယူပါ။
လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန်အတွက် အခွင့်ရအကောင့်ပိုင်ရှင်/ ယာဉ်မောင်းအဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပေးပို့သဘောတူခဲ့ပြီး လူကြီးမင်း၏ အခြေခံအချက်အလက်တွင် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သိုလှောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် အသင်းဝင်လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ထားသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ရယူထားမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းသည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်ဖြစ်လာစေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးပို့ ခြင်း မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်အဖြစ် မော်တော်ယာဉ်များကို အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေဆက်သွယ်ရေး - ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များနှင့် အထူးကမ်းလှမ်း ချက်များအား စဉ်ဆက်မပြတ်သိရှိနိုင်စေရန် လူကြီးမင်း၏ လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ထားသော ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက် အလက်ပေါ်မူတည်၍ သတင်းအချက်အလက်များကို အီးမေးလ်မှဖြစ်စေ၊ စာတိုပေးပို့၍ဖြစ်စေ၊ သတင်းတင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ပုံမှန်ပေးပို့ မည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဤနောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အထူးကမ်းလှမ်းချက်များကို မရယူရန် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ရွေးချယ်ထားမိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ aung@yomafleet.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် အချိန်မရွေးပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှ ထုတ်ပြန်နိုင်သည် -
၄.၁. ရိုးမနှင့် FMI အုပ်စုအောက်ရှိကုမ္ပဏီများအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော ကုမ္ပဏီများအပါအဝင်
၄.၂. ကျွန်ုပ်တို့၏ တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အွန်လိုင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ အပါအဝင်
၄.၃. အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည် အကောင့်ပိုင်ရှင်မဟုတ်သော ယာဉ်မောင်းတဦးဖြစ်နေလျှင် သော်လည်းကောင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းမှာ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော အကောင့်ပိုင်ရှင်များ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုကို ခွင့်ပြုထားရမည်။ မှန်ကန်သည့် အီးမေးလ်လိပ်စာ မရှိသော အဖွဲ့ဝင်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
လူကြီးမင်းနှင့် လူကြီးမင်း၏ယာဉ်မောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်များအား ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးပို့ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရေးပါသော ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အကောင့်များ သို့မဟုတ် အထူးကမ်းလှမ်းချက်များကို အသိပေးရန်အတွက်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ကြိုတင်ငှားရမ်းမှု ပြုလုပ်နေစဉ်အတောအတွင်း လက်ကိုင်ဖုန်း အား မိမိအနားတွင် ထားရှိစေရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကားအသုံးပြုရန်နှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ကို ပေးဆောင်ရန် အာမမခံနိုင်ပါ။
မိမိလက်ရှိအသုံးပြုနေသော အဆက်အသွယ်နှင့် ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည့် အီးမေးလ်၊ ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ထိန်းသိမ်းထားရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ အီးမေးလ်သည် ပြန်ဝင်လာခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အီးမေးလ်များကို လက်ခံရရှိခြင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်လျှင် ၎င်းအီးမေးလ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်မဟုတ်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်/ ယာဉ်မောင်းများ၏ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးပို့ရန်မှာ ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးသည် ၎င်းတို့ထံမှအလုပ်ထွက်သွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါက ကော်ပိုရိတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ဝန်ခံခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်/ယာဉ်မောင်းမှ ပေးဆောင်ရမည့် မည်သည့်အခဒဏ်ကြေးငွေမဆို ပေးဆောင်ရန် သဘောတူ လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။
အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ ၎င်း၏ နေရပ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အစရှိသည့် အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲပါက ကျွန်ုပ်ပ်တို့၏ Yoma Car Share ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (သို့မဟုတ်) မိုဘိုင်းအပလီကေရှင်းတွင် ပြောင်းလဲသွားသော အချက်အလက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ရမည်၊ အသိပေးရမည်။ ထိုကဲ့သို့ နောက်ဆုံးနှင့် မှန်ကန်သော အချက် အလက်များ ဖေါ်ပြမှု အသိပေးမှုမရှိသော အကောင့်ပိုင်ရှင်အား ကျွန်ုပ်တို့မှ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center သည် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ ၇ ရက် ရုံးပိတ်ရက်များဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၀၉၉၆၂၂၃၅၃၈ သို့ ခေါ်ဆိုဆက်သွယ် နိုင်သည်။ မေးမြန်းချက်အားလုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအား အချိန်မရွေး ရပ်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အကောင့် ဖျက်သိမ်းမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ aung@yomafleet.com သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ အကြောင်းကြားနိုင်ပြီး ထိပုတ်ကဒ်အား ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။
လူကြီးမင်းသည် လူကြီးမင်း၏အကောင့်အောက်ရှိ မည်သည့်ယာဉ်မောင်းကိုမဆို အချိန်မရွေးရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ထိုသို့ဖယ်ရှားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ aung@yomafleet.com သို့ ဆက်သွယ်ပြီး အကြောင်းကြားနိုင်သည်။
ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အကောင့်ပိုင်ရှင်နှင့် / သို့မဟုတ် အခွင့်ရယာဉ်မောင်းကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ချက်ချင်းရပ်စဲနိုင်သည်။
အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းသည် လူကြီးမင်းမှ ပေးချေရန်ကျန်ရှိသည့် မည်သည့်ငွေကြေးကိုမဆို လက်ခံနိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲသည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးချေရန် ကျန်ရှိနေသည့် မည်သည့်အခကြေးငွေကိုမဆို ချက်ချင်း ပေးချေရမည် ဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူလက်ခံခြင်းအားဖြင့်၊ လူကြီးမင်းသည် အသင်းဝင်အဖြစ် မှ ရပ်စဲသည့်အချိန်တွင် ပေးချေရမည့် အခကြေးငွေအားလုံးကို လူကြီးမင်း သတ်မှတ်ထားသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအတိုင်း ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ် (၁၅) တွင် ဖော်ပြထားသော ယာဉ်ရပ်နားခြင်းနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ ဒဏ်ကြေးငွေများ အပါအဝင် ကားခိုးခံရခြင်း၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် တရားရုံးစရိတ်များပါ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို ချိုးဖောက်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အကြွေးရည်ညွှန်းသည့်အေဂျင်စီများ၊ အကောက်ခွန်နှင့်ယစ်မျိုး၊ သက်ဆိုင်ရာရဲဌာန၊ ကြွေးမြီကောက်ခံသူများ သို့မဟုတ် အခြား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ‌ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုက်ခြင်းသည် ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုမှ အချက်အလက်များကို ထိခိုက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကို လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ အပြောင်းအလဲသတိပေးအကြောင်းကြားစာကို ငှားရမ်းခြင်းအတည်ပြု အီးမေးလ်ဖြင့် လူကြီးမင်းထံသို့ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ အပြောင်းအလဲကို သတိပြုရန်မှာ လူကြီးမင်း၏ တာဝန်သာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းအား အကြောင်းကြားရန် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မဟုတ်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့်နှေးမှု၊ ပျက်ကွက်မှု သို့ နှောင့်နှေးမှု ဖြစ်စေသော မည်သည့်ကိစ္စရပ်များမဆို ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်သော ကိစ္စရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် အတားအဆီးအ‌နှောင့်အယှက် တခုခုကို ဆိုလိုသည်။
သဘောတူစာချုပ်ပါ ပြဌာန်းချက်များသည် မခိုင်လုံသော၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုမပြုနိုင်သော ကိစ္စရပ်များ ပါရှိပါက ကျန်ရှိသော ပြဌာန်းချက်များသည် ဆက်လက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။
ဤသဘောတူစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ်ပေါ်ပေါက်လာသော ကိစ္စရပ်များအားလုံးကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် တရားရုံးများသည် ဤငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်ကမ်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သော သို့ မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အငြင်းပွားမှုတစုံတရာကိုမဆို ဆုံးဖြတ်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ တတိယအဖွဲ့အစည်းကို ထောက်ခံ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေးသား ထားသော ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များအရ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးအား အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လူကြီးမင်းတို့အကြား ဆက်စပ်နေသည့် သဘောတူညီမှု ပုံစံသာလျှင်ဖြစ်သည် - ဆိုလိုသည်မှာ အီလက်ထရွန်နစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်သည် စာရွက်ပေါ်တွင် လူကြီးမင်း၏ သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရရှိထားခြင်း ဖြစ်သကဲ့သို့ လူကြီးမင်းမှ နားလည်သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်သည်။